Capricorn uye Capricorn kuenderana: Rudo, Bonde & Hushamwari - Zodiac Zviratidzo
Capricorn uye Capricorn kuenderana: Rudo, Bonde & Hushamwari
Kuenderana kweCapricorn neCapricorn kwakanaka asi kunoda basa kubva kune ese mapato. Kuchengeta zvinhu zvinonhuwirira ndeimwe yenyaya hombe mbiri dzakatarisana nevanoda veCapricorn. Asi, nekuchengetedza kutendeseka kwechisungo chemweya, uyu vaviri anogona kuwana rudo rwekusingaperi. Muchokwadi, pane kushoma kumisa iri timu yeteki kubva mukuzadzisa zvese zvavanorota!
MaCapricorn maviri anogadzira nzvimbo ine rudo uye inosimudzira. Iko pano apo mapato ese anogona kunzwa akachengeteka mukumbundirana kweumwe. Capricorn vanochiva chengetedzo uye chengetedzo. Hunhu hwese huviri hunopinda murudo vachiziva zvavanoda kuti rudo rwuite zvakanaka. Kunze kwezvo, ndiani anoziva Capricorn zvirinani kupfuura imwe Capricorn?
Iyi duo ine simba haizowana dambudziko nekuwana budiriro yemari. Kuyerera kwemari uye kuchengetedza hazviwanzo kuve nyaya neCapricorn-Capricorn vakaroora. Mapato ese ari maviri vashandi vakazvipira vanoziva kukosha kwedhora. Ivo panzvimbo pezvo vanochengeta izvo zvavanowana kwezuva rekunaya pane kutambisa pazvinhu zvisina basa. Ne kugadzikana kwezvemari uye kuchengetedzeka kwemanzwiro sehukama hwekona matombo, maCapricorn anowana mufaro wekudanana!
Capricorn uye Capricorn Tafura yezviri Mukati
Capricorn uye Capricorn kugarisana
Capricorn uye Capricorn Rudo
Capricorn uye Capricorn Bonde
Capricorn Murume uye Capricorn Mukadzi Kuenderana
Capricorn Mukadzi uye Capricorn Man Kuenderana
Capricorn uye Capricorn Rudo Mechi Kuputira-Kumusoro
MaCapricorn ane hunhu, akangwarira, uye anokwikwidza hunhu. Kana vachishanda pamwechete pachinangwa chakafanana, yavo yemakwikwi hunhu. Inovapa imwe yekutyaira, ichivaita vanoramba vari vashandi mune chero chiitiko. Mapato ese ari maviri anoongorora, saka vacharonga nzira yavo yekubudirira. MaCapricorn anoshanda nesimba kuti vagadzire nzira yekuzadzisa zvishuwo zvavo.
Mapati muCapricorn neCapricorn rudo mutambo anotora nzira yakajairika kune hupenyu. Vanosarudza kudzivisa melodramatics kana chero chinhu chinodzora. Ose maviri hunhu zvakare ane mari savvy.
Kuva nehungwaru nezvemari kunotendera kuti vaviri ava vadzivise nharo vamwe vakaroorana vane mari yakawanda. Kana maCapricorn maviri akagadzirira kuvaka hupenyu pamwechete, ivo vane nzwisiso yekutaura zvinangwa zvavo. Kuchengetera zororo rakapfava uye rakasununguka mushure memakore ebasa rakaoma riri pamusoro peyavo 'yekuita' rondedzero.
Kuva nemari chinhu chimwe chinobvumirana maCapricorn pakuita. Inonzwisisika uye inoshuvira chengetedzo munzvimbo dzese dzehupenyu, stashing mari inoita yakajeka pfungwa. Capricorn haisi pfupi kupfupisa. Vachatenga kana kutengesa kuri kuwanikwa. Kupera kwevhiki vane vaviri vacho vachicheka makuponi kubva papepa reSvondo. Makadhi avo echikwereti ndiwo mhando kwavanowana mari kudzoka kana zvimwe zvinokwezva. MaCapricorn maviri anogona kushanda nemupi wezano wezvemari. Ivo vanoda kutambanudza kukosha kwedhora roga roga rakawanikwa.
Muhukama hwaCapricorn neCapricorn, mapato ese ari maviri anowanzo sarudza vakura vevakaroora. Ose maCapricorn anosarudza vakachenjera vakaroorana avo vakawana huchenjeri kuburikidza neicho chaicho-chiitiko chenyika. Ivo vanosarudzawo vakwanyina vakaita tsoka uye vakawana budiriro yemari. Pazasi mutsara apa maCapricorn zvisikwa zvinowana budiriro yemari chinokwezva. Inovavimbisa chengetedzo yavanochiva muhukama.
Izvo zvinhu zvinowanwa neCapricorn zvinoshamisira zvinosiyana nezvinogona kuwanikwa nevamwe zvinokwezva. Kana Capricorn ikaona mumwe anoshanda nesimba, kukwezva kwacho kuri ipapo. Kuzvipira kwemumwe kubasa kunoratidza danho ravo rekugadzirisa. Capricorn yakafanana neumwe ane grit uye yakawanda yekuda.
Asi, nekuda kwekuti Capricorn anoisa basa pakutanga, hazvireve kuti havazive kukosha kwekunakidzwa! Pakupedzisira, vanosvika kune imwe nguva yekuzorora. Vanotamba zvakaoma sekushanda kwavo! Capricorn anokurumidza-kuruka uye anofarira kuseka kutenderera. Kuseka kwavo kunoenda kure kure mukuita kuti vaviri ava vafare vachiwirirana.
Simba repasi rinochinja mutambo weCapricorn neCapricorn rinoita kuti duo iri rive rakachengeteka. Vaviri hunhu hunofungidzirwa uye hune mutoro. Havazove nedambudziko rekumisa imba kana kurera mhuri. Asi, mhuri ingangove iri kumashure-inopisa. Zvirinani kusvikira vaviri ava vakunda runyorwa rurefu rwezvinangwa zvavanoda kuzadzisa.
Zvepabonde, mutambo weCapricorn neCapricorn rudo unowanzoita tsika pakutanga. Asi, pavanonzwa vakachengeteka padanho remanzwiro, danho rehukama rinowedzera. Iyo yakachengeteka rudo dendere iyi duo inogadzira mhedzisiro mukusununguka kwavo pabonde! Ivo vanozotama kubva kuchinyakare bonde mafambiro ekuyedza munguva pfupi. Simba ravo rine mukurumbira, uye ndozvakaitawo kureba kwemasangano avo erudo!
Dambudziko nehukama uhwu rinotanga mushure mekuve pamwechete kwenguva yakareba. Kugadzikana kunogadzika kana maCapricorn maviri achitarisa pane vavariro pane kudanana. Zviri nyore kwazvo kudzoka kumba kubva kubasa rakaoma kwezuva wakaneta. Zviri kunyange nyore kukanganwa pamusoro kudiwa romancing. Kunyanya kana ese maCapricorn ari kuenda kubasa zvakasiyana.
Mabasa epasi rose ezuva nezuva anouya pamberi. Iko kunakidzwa kwehukama fizzles. Kana izvi zvikaitika, zvinokwanisika kuti vaviri ava vanozovandudza simba remubereki nemwana. Mumwe mudiwa achange ari pamba kupfuura mumwe. Iye wekugara-pamba-shamwari achaita senge nag kune mumwe wake anopandukira nzira. Ehezve, ndiko kuti kana paine wekugara-pamba mudiwa zvachose. Mazhinji maCapricorn anosarudza mapato maviri anoshanda kunze kwenyika. Kana vasingagovane maduty kana vari kumba, zvinhu zvinobva zvaita manyama amire nerongo!
Kune hupenyu hwebonde hunobudirira, Capricorn naCapricorn vanofanirwa kuongorora zvekare ajenda dzavo. Inguva yepenzura mune imwe nguva yekuzorora pamwe nemumwe sechimwe chezviitiko zvezuva nezuva. Kuronga pamwe chete kwekushanya uye nguva dzekushamwaridzana zvinobatsirawo kuti kudanana kwacho kurambe kuripo. Sezvo kudanana uye kubatana kwemanzwiro kuchikura, hupenyu hwepabonde hunowedzera kukurudzira.
Pamwe chete nekuchengetedza rudo rwakanyanya, mutambo weCapricorn-Capricorn unofanirwa kugona kutamba kwekunyengera. Kusvirana uye nekusiyirana shuwa kunoita kuti hukama hwepabonde hunakidze. Vaviri ava vanofanirwa kushandira kuita kuti mumwe neumwe ashuve kusangana pabonde zvakanyanya.
Capricorn uye Capricorn Kutaurirana
Kana maCapricorn maviri achitaurirana, zvinoreva kuti vane chimwe chinhu chakakosha kutaura. Capricorn haisi imwe yekucheka mazwi. Vanosarudza kwavo kutaurirana kwakananga uye kunopisa. Iyo yakanyanya kunanga, zvirinani. Kune vekunze, zvinogona kuoneka maCapricorn asina chipo chegab. Chokwadi ndechekuti, yavo yakakosha pfuma inguva, uye havadi kuitambisa. Kunzwisisa yavo yakasarudzika kutaurirana maitiro kunowedzera Capricorn uye Capricorn kuenderana.
Kunyangwe kuchengeta kutaurirana kuri kupfupi uye kuri nyore, dzimwe nguva Capricorn inotaura zvese zvisirizvo zvinhu. Ivo vanoguma nekuchimbidza kuti hurukuro ipere pamwe kuti vadzokere kubhizinesi. Kana vasingafunge vasati vataura, mazwi anokuvadza anobaya.
Kupfupika kwekutaurirana kwavo kunoitawo kuti Capricorn iite senge inozvifunga uye isingakoshe. Chinhu chakanaka chinhu cheCapricorn chakangwara. Hunyanzvi hunoenda kure kure kubatsira Capricorn kutaurirana nemhepo yakareruka.
Kuchengeta hurukuro terse zvinoreva kuti Capricorn anozvipira nemaoko avanosarudza. Ivo vanoda kuburitsa poindi yavo nekukurumidza uye pasina kupokana nezvayo. Capricorn ine yakanyanya kushuvira uye yakasimba maseturu. Runyorwa rwavo rwemabhaketi rwakawandisa, uye vaviri ava vanoronga kuongorora zvese zvavaronga kuita.
virgo murume uye taurus mukadzi kuenderana
Kupesana kweCapricorn neCapricorn
Kana mapato ari muhukama hwaCapricorn neCapricorn awirirana, zvese zvakanaka. Asi, dzimwe nguva maCapricorn anotendera yavo yakasviba kuti itore midzi. Kana iwo mumvuri wega weKapricorn uchitonga, matambudziko anomuka. Iyi duo inoshanduka isina kugadzikana, ine hukasha, uye inopokana.
Capricorn anoteedzera kurota kwavo nechisimba chiito. Hapana chavacharega chichi mira munzira yekuzadzisa zviroto uye zvinangwa. Iko kutarisisa kwavo kunogona kuratidza kwakanyanyisa uye vanobva vatadza kuona iwo mufananidzo muhombe. Pasina kutora nguva nemumwe, maCapricorn maviri anogona kuuraya nzara nzara.
Kana vaviri ava vachitarisa pazvirongwa zvakasiyana, zvakatonyanya. Egocentricity inotonga pamwe vaviri ava vanofamba munzira mbiri dzakasiyana. Ivo vanove vasina hanya uye vakashushikana nekushinga chinzvimbo. Kana mumwe wako achinyunyuta nekuda kwekunzwa kushaya hanya, imwechete-yakatarisana Capricorn inokura yakatsamwa. Zvinhu zvinoenda kubva kumubatanidzwa kuenda kunetsana mu zero kusvika makumi matanhatu!
Capricorn uye Capricorn Polarity
Zviratidzo zvese mune zodiac zvinoenderana neimwe yeanoremekedzwa maviri. Iwo polarities ari Yin uye Yang. Yin munhukadzi. Yang inopesana. Aya masimba anowirirana. Ivo vanovimbisa kuwirirana kana vari muchiyero uye vachikurudzira hukama. Mamiriro ezvinhu polarities anoita basa muCapricorn uye Capricorn kuenderana.
Capricorn inowirirana neYin. Zvinovaita kuti vapfeke, vhure, uye vanzwisise. Chero bedzi pavanoramba vari muchiyero, maCapricorn anowirirana zvakanaka. A Capricorn uye Capricorn rudo rwechinhu rwune nyoro, rudo, uye rudo. Ivo vanobatana padanho repfungwa nekuti vanozivana kwazvo.
Kana kunze kwekuyera, Yin inoparadzanisa. Mhedzisiro yacho inoita kuti Capricorn ishaiwe, inozvifunga, uye yekungoita-hasha. Panzvimbo pekuvhurirana kune mumwe zvaunoda, vaviri vacho vanopinda kumberi zvakasiyana. Kusvikira vadzorera zvakaenzana, zvinoita sekunge kune nzou chena hombe mukamuri pakati pavo. Hapana bato rakanangana nekugadzirisa zvinetswa zviripo. Zvinotungamira mukusatsamwa kusingataurike uye mhedzisiro inorwadza kuhukama.
Iyo chete nzira yekugadzirisa iyo polarization yeYin mauto ndeyekugamuchira Yang simba. Kuita izvi kunoita kuti mapato ese ari maviri awedzere kuita, akatwasuka, uye ave nesimba. Capricorn inotaridzika kudzivirirwa pachinzvimbo chekuchekedzana pasi.
Capricorn uye Capricorn Zvinhu
Kureba pakati pezviratidzo zvezodhiac chiyero mukuenderana. Iyo daro inoumba kona kana chimiro. Kuonekwa muhukama hwaCapricorn neCapricorn zero zero. Iko hakuna kona iripo. Zviratidzo zvakafanana mukubatana hazvina daro pakati pazvo. Chiyero chinobatanidza chinhu.
Kana zviratidzo zvakabatana, zvakafanana nekubatanidza mapatya akafanana pamwechete. Vaviri ava vanozivana chaizvo, mukati nekunze. Ivo vane zvakafanana maonero uye nekodhi yetsika yakafanana. Yakadzika maCapricorn anokoshesa iwo mafaro akafanana muhupenyu. Ivo vanoziva zvavanoda uye vachashanda pamwe chete kuti zviitike. Neimwe Capricorn iri murudo nemumwe, chiito chekuzvida-pachako senge chiito chekuda mumwe.
MaCapricorn maviri ajoina chirevo chakajeka mapato ese ari murudo anotambira zvavari. Ivo vanoziva hunhu hwavo hwakasimba uye kusasimba. Iyi duo ichaisa tarisiro pane kwavo kusimba. Kuita izvi kunopa hukama hukama. Ivo vanofanirwa kutarisira kuti vasakure zvakare kujairana nemumwe. Kana vakadaro, kujairana kunounza ruzvidzo. Vanozokweshana zvisizvo. Kukakavara kwese kuchave nehukama hunopisa uye fizzling kunze.
Capricorn uye Capricorn Elements
Zviratidzo zvese mune zodiac zvinoenderana nechimwe chezvinhu zvina: Mhepo, Moto, Pasi, kana Mvura. Capricorn inoenderana neNyika. Izvi zvinoita kuti Capricorn igadzikane, igare yakasimba, uye igare yakavimbika. Hunhu hwekupedzisira hunovaita simba rekutarisa naro kubasa. Kuzvipira kutungamira hupenyu hwakavimbika kunovaitawo ivo vateedzeri muhupenyu hwavo hwepachivande.
Iine Nyika ichikurudzira hunhu hwavo, maCapricorn vane huchenjeri hwemari. Ivo vanoziva ivo vanofanirwa kuchengetedza mari izvozvi kune ramangwana kuwanda. Capricorn inoshuva uye zviroto. Asi, ivhu simba rinovimbisa kuti havakwire zvakanyanya nekurota kwavo. Zvinangwa zvisipo zvekuda chinzvimbo hapana zviripo kunze kwekunyepedzera.
Kuenderana kweCapricorn neCapricorn kunoenderana nekuremekedzana. Izvo zvakare zvinoenderana nemaitiro akasimba erudo. Kuvimbika chinhu chakakosha mukuchengetedza chimiro chehukama hwakasimba. Kukwanisa kuvimba mumwe nemumwe kunotendera kufambidzana kwepamoyo. Chivimbo chinobvumira maCapricorn kuwana rusununguko pabonde.
Zvinhu zvinoenda pahuswa kana simba repanyika raCapricorn richivashandura kuita chimuti-mumatope. Inertia uye kusaita zvinhu zvakakosha mukufa kwehukama. Nepo kubatanidzwa kweCapricorn neCapricorn kuchikura nekukurumidza, kufinhwa ndeimwe yezvipikiri mubhokisi rekudanana uku. Vaviri ava vanofanirwa kufambira mberi mberi kuti vanzwe vakachengeteka pamwe chete. Kana hukama hwacho hukashaikwa uye husingaenzanisike, ese maCapricorn anonzwa kuti vane zvinhu zviri nani zvekuita. Kushaikwa kwekuenderera kwakaenzana nekuparara kwehukama.
Mutambo werudo weCapricorn neCapricorn ndeimwe yematanho akaomesesa mune zodiac. Nezvo zvataurwa, inogona zvakare kuve inokomborera kwazvo rudo mutambo. Zvinotora nguva yakareba kuti maCapricorn amise chisungo chekuvimba chavanoda. Izvo chete kana ivo vanonzwa pfungwa yekuchengetedzeka pakati pavo ndipo pavanogovana manzwiro chaiwo kune mumwe nemumwe. Kana maCapricorn maviri akazopedzisira ashandisa iro 'rudo' izwi, ivo vanoreva.
Murume weCapricorn haasi wekusvetukira munzvimbo yekufambidzana. Anozeza pakusarudza wekuroora naye nekuda kwezvikonzero zviviri. Kutanga, murume weCapricorn anogona kunge achisarudzika, zvinoita sekutora iye zvachose kusvika mukadzi. Kusarudza kwake kuedza kuzvidzivirira. Anoda kunzvenga melodrama kana chepfu inokanganisa manzwiro. Iye murume weCapricorn haasi-asina maturo mhando mukomana. Kuva akasarudzika kune zvakapesana nako futi. Zvinokwanisika iye achaisa bhaa rekutarisira kune mumwe wake nzira yakanyanyisa.
Kufunga kwake kwekuongorora zvese kunoita kuti atarise waanogona kuroora. Anomutarisa kwemazuva kana masvondo asati asvika kwaari. Anoda kuve nechokwadi kuti achave nezvakawanda zvakafanana nemukadzi wezvaanofarira. Iye murume weCapricorn anoda kuziva zvaari nezvese, zvaanofarira, uye kana akagwinya pazvinangwa zvake.
Hazvishamise apo murume weCapricorn anosangana neCapricorn Mukadzi kubasa. Kana akasasangana naye achiri kushanda, anobva amuona achishanda panzvimbo yake pabasa. Iyo inoshingaira mushandi-nyuchi mhando iyo Capricorn Man inoona inokwezva! Kuona Mukadzi weCapricorn achiteedzera zvinangwa zvake ndiko kusimbiswa kwekutyaira kwake. Kune iyo Capricorn Man, iyo chete aphrodisiac iri pasirese chishuwo!
Mukadzi weCapricorn anoziva kuti murume weCapricorn ane kusagadzikana. Anoziva sei? Nekuti, iye anogovera zvakafanana, kwakadzika kusagadzikana. Zvese zvekusagadzikana kweCapricorn zvinoenderana nekutya kwakadzika kwekuda chero chinhu kana chero munhu. Uku kutya kumwe chete kutyaira maCapricorn mazhinji kuti ave mashandiro. Ivo panzvimbo pezvo vanoshanda minwe yavo kubhonzo kuti vaone kuchengetedzeka kwemari. Ichokwadi kurova kuzviwana ivo vari mune yekushaiwa gare gare!
Mukadzi weCapricorn anoziva pasi pemukomana wake akanaka, anoshanda anoshingairira facade mudikani anoda. Iyi duo inogona kunge iri nyanzvi dzehunyanzvi neese epamoyo-anotungamira pfungwa masikati. Asi, kana vaviri ava vachidonhedza mumvuri uye vodzima mwenje, ndipo apo hunhu hwavo hwepakutanga hunobvarura kubva mukeji! Iye murume weCapricorn neMukadzi weCapricorn vanochengeta chishuwo chavo chakakwira uye chakavanzika. Isimba iri rakakwenenzverwa rinokuchidzira maOlimpiki-maitiro ebonde zvikamu gare gare!
Rimwe dambudziko rakatarisana neCapricorn neCapricorn rudo kusakwanisa kuteerera. Iye anodonha-akafa anotyisa pakuteerera kune vamwe. Ehe, anotora gwara kubasa. Asi, haasi mumwe akanaka pakutora nzira kunze kwebhokisi rejecha kwaanotamba vavariro dzake. Kana Mukadzi weKapricorn achida kutaura manzwiro, akanaka pakunyepedzera kugadzirisa kwake mukati. Chaizvoizvo, kutaura kwepamoyo uye yakakosha chit-chat ruzha ruchena rweMurume weCapricorn. Iko kusakwanisa kutenderedza kune mumwe wake kunoita kuti zviome kuchengetedza hukama hwepamoyo hwakasimba.
Kuenderana kweCapricorn neCapricorn chinhu chisina kusimba. Hazvina kufanana neiyi duo haifi yakadanana. Asi, kuchengetedza rudo kuenda uye kunakidzwa kwerudo kuri kurarama imwe nyaya. Zvinotora kutarisisa pahunhu hwavo hwakanakisa kuchengetedza kuwirirana!
Mukadzi weCapricorn haagoni kubatsira asi kuwana murume weCapricorn anoyevedza. Kana iye achimuona ari muchiito, iye achaona iye achitora chinzvimbo chekutungamira mune chero mamiriro ezvinhu sepro. Akadzikama, akadzikama, uye akadzikama, kunyangwe pakatarisana nedambudziko. Ipo munhu wese achimhanya sehuku dzisina misoro, murume weCapricorn anozvishingisa. Anopinda mukati mekupenga achitora kutonga. Kukwanisa kwake kubata chero chinhu pasina kurasikirwa nekuzvidzora kunomupa iyo yakadzika pfungwa yekuchengetedza.
Kana ivo pakupedzisira vachidanana, Mukadzi weCapricorn anozviona ari muCapricorn Man. Iye akura, akatendeseka, uye akananga. Iye ari parutivi rwakanyarara, asi izvo chete nekuti anongotaura chete kana awana chimwe chinhu chine musoro chekutaura. Anofarira maitiro ake akanyarara. Zvinomupa mweya wezvakavanzika uye zvinoita kuti awedzere kufadza.
Mumwe murume weCapricorn anouya semurume munyoro mune ese pfungwa yeshoko. Pamazuva nekubuda, anomuvhurira gonhi remota. Anotora ruoko rwake, amutungamirire patafura, obuditsa chigaro kwaari. Kana iyo tabu yauya, anoitora iye asati apokana kuti ndiani achabhadhara. Muchidimbu, ari kumuratidza kuti angave anodanana sei. Ari kumuratidza iye ari mukutonga kuzere, nenzira yaanoifarira. Paanobhadhara bhiri, ari kuita chimwe chinhu chakanaka, chechokwadi. Asi iye haafarire kukweretesa chero munhu chero chinhu!
Mukadzi weCapricorn achaita zvakanaka mukufadza mumwe wake nekumutamba uye nekumuteerera zvizere. Kutarisisa kwake kunofanirwa kugara paari uye iye chete nguva dzese. Nekusagadzikana kwakadzika, murume weCapricorn anozoita godo nyore. Shanje dzake dzinomuka apo Mukadzi weCapricorn anoshamwaridzana nevamwe varume. Zvinomugumbura kunyangwe ichingova kudyidzana kune hushamwari. Haazoburitse godo rake futi. Asi, murume weCapricorn anozorega chigumbu chiwedzere. Sei? Nekuti ndiye mukomana anozotonhora uye kure asingatsanangure zvikonzero nei.
Kana Mukadzi weCapricorn ane mhuka ye totem, inzou. Ndangariro yavo iri padhuze kusakwanisa kuenzana. Chinhu chakanaka, uye chinhu chakaipa kuva nenzira dzakasimba kudaro dzekurangarira zvese zvishoma. Yekupedzisira yekutora mifananidzo inoshandira Mukadzi Capricorn mushe pabasa. Izvo zvinoita kuti iye arangarire zvese izvo chokwadi uye manhamba. Asi, apo paanogona kurangarira nguva dzese apo murume weCapricorn anomushungurudza, haisi chinhu chakakura kudaro chehukama.
Zvinotoipisisa kana achirangarira nharo dzese uye chero zvinhu zvinokuvadza zvaangangodaro akataura akatsamwa. Capricorn haisi iyo yakanakisa yekutarisa imwe nzira kana kutendeuka rimwe dama. Ruvengo pakati pavo runobika uye rwunokura. Asi, haadi kutambisa nguva kuyedza kubvisa kurwadziwa kwekare, kunyangwe ichiruma. Iye anozove ari ega uye ari kure kwake pachinzvimbo.
Mutambo weCapricorn neCapricorn rudo ipara isina kujairika. Sei? Nekuti ndiko kubatana kunonetsa kwerudo. Asi, hazviite mubatanidzwa usingabviri. MaCapricorn maviri anogona kubatsira rudo kutumbuka nekuramba yakavhurika kune mumwe nemumwe. Nekugamuchira mumwe neumwe misiyano, maCapricorn maviri anogona kunakidzwa nerudo rwakanyanya! Kubatana, kushivirira, uye kunzwisisa zvakakosha kune vese mapato, zvakadaro. Tarisa pane zvavakafanana zvinobatsira kutsigira rudo rwavanogovana.
Iwe une yakaoma rudo kubatana? Iwe unoziva nezve izvo zvinojairika hunhu zvaunogovana nemumwe wako? Zvakadiniko nemisiyano yenyu? Rega Mazuva ese Horoscope Astros ikuratidze maitiro ekuita zvakanyanya zvehukama hwakaoma. Kuenderana kwenyanzvi kunopa iwe neruzivo rwekudanana. Dzidza zvese zvaunoda kuti ushandise zvakanyanya rudo rwako nyaya!
Verenga Zvese Nezve Iyo Capricorn Zodiac Sign
Dzvanya kuti udzidze zvese nezve Maitiro eKapricorn, Hunhu, & Hunhu !
Kutsvaga rudo? Dzvanya kuti uverenge zvese nezve Capricorn kugarisana !
Wana zvakadzama info nezve Capricorn Munhu !
Zarura chakavanzika cheiyo Capricorn Mukadzi !
Une Capricorn Mwanasikana kana Mwanakomana? Dzvanya kuti uverenge zvese nezve Capricorn Mwana !
Zvinorehwa nenhamba 111 mubhaibheri
iripi jupita musolar system
taurus murume ari pamubhedha nemukadzi capricorn
scorpios inowirirana neibra